Fanaanada Saada Cali Warasame oo ka tacsiyaynaysa geerida Alle ha u naxariistee C/llahi Yusuf Axmed. – Radio Daljir
Fanaanada Saada Cali Warasame oo ka tacsiyaynaysa geerida Alle ha u naxariistee C/llahi Yusuf Axmed.
Fanaanada Somaaliyeed Saado Cali Warsame oo ka mid ah fanaaniintii Waaberi ee jamhuuriyada Somaliya ayaa tacsi tiiraanyo leh u dirtay ummadda Somaliyeed geerida naxdinta leh ee ku timid madaxweynihii hore ee Somaliya C/llaahi Yuusuf Axmed oo ku geeriyoodey dalka Isutaga Imaaraadka Carabta.
Fanaanada Saada Cali Warsame ayaa marxuumka Alle u weydiisey in uu janadii geeyo ummadda Somaliyedna samir, imaan & bedel khayr qaba ka siiyo.
Tacsi: Saada Cali Warsame
Idaacada Daljir waxaa xarumaheeda kala duwan buux dhaafiyey tacsi ay dadka Somaliyeed ee wax ku oolka ahi gaarsiinayaan dhamaan ummadda Somaliyeed oo ay uga tacsiyeynayaan geeridii marxuum C/llaahi Yuusuf Axmed.